Pakistan oo xustay Askar Muqdisho loogu dilay 25 sano kahor!!
Dalka Pakistan waxaa lagu qabtay xus loo sameeyay Askartii dalka Pakistaan looga dilay Magaalada Muqdisho Sanadkii 1993dii.
Ciidamada Pakistan waxaa ay ka mid ahaayeen Howlgalkii Qaramada Midoobey ee Rajo soo celinta kaddib markii ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Dowladda Pakistan waxaa ay ahayd dalkii ugu horreeyay ee Ciidamadiisa ku biiriyay markii howlgalkaas ay ku dhawaaqday Qaramada Midoobey.
Inta badan Howlgalkii UNISOM,waxaa macno ahaan la wareegay Mareykanka oo 18 Askari looga dilay Muqdisho,sababtuna waxaa ay tahay Mareykanku waa uu buun buuniyay ilaa uu Filim ka sameeyay dhibaatada ka qabsatay Muqdisho.
Mac-hadka Barashada Nabadda ee (PIPS),ayaa soo qaban qaabiyay munaasibadda xuska ah oo ay ka qeybgaleen mas’uuliyiin ka socday Pakistan,Danjiraha Soomaaliya ee Pakistan iyo Danjiraha Talyaaniga ee Pakistan.
Mas’uuliyiinta ayaa hadallo kala duwan iyo xusuusba ka jeediyay madasha,waxaana lagu qiray in Talyaaniga iyo Pakistan ay si wada jir ah uga wada qeyb qaateen howlgalkaas.
Mac-hadka ayaa soo bandhigay Daraasad ama sahan uu cinwaan uga dhigay "Howlgallada Nabad ilaalinta waa in ay cashar ka bartaan Muqdisho”.
Sahanka ayaa guud ahaan muujinaya qaladka ka dhacay ka hor inta aan howlgalka la billaabin,waxaana qaladkaasi ahaa in aan sahanka hore ee howlgalka ka horreeyay lagu darin qeybta qabyaaladda iyo baratanka qabiillada Soomaalida,kaliyana laga fiiriyay gargaarka Banidamnimada.
Bishii June, Sanadkii 1993dii Dalka Pakistan waxaa Muqdisho looga dilay 23 Askari,waxaa sidoo kale la dhaawacay 52 kale oo 17 ka mid ah ay lixaadka beeleen.
Agaasimaha Mac-hadka PIPS, Muhammad Amir Rana, ayaa madasha ka sheegay in Ciidamada Pakistan ay bad baadiyeen Askar Mareykan ah oo dagaal ku go’doomay soona badbaadiyeen,taas oo aanay jirin ilaa hadda cid xusta.
Sidoo kale maalinta la dilayay 23ka Askarta Pakistan waxaa iyaguna u gurmaday Ciidamada Talyaaniga oo howlgalkii Qaramada Midoobey ee Soomaaliya qeybta ka ahaa.
Danjiraha Soomaaliya ee Pakistan Khadija Al-Makhzoomi,ayaa ka tacsiyadeysay waxyeellada gaartay Ciidanka Pakistan ee tagay Soomaaliya, sidoo kale danjiraha Talyaaniga ee Pakistan Stefano Pontecorvo ayaa isaguna ka tacsiyeeyay khasaaraha Ciidanka Pakistan 25 Sano ka hor ku gaaray Muqdisho.
Madaxweyne ku xigeenka Jaamacadda Sargodha University , Dr Ishtiaq, ayaa sheegay in howlgallada Qaramada Midoobey ay leeyihiin xusuus wanaagsan oo ifaysa iyo xusuus Mugddi ah,waxaana uu kula taliyay in howlgallada inta aysan billaaban la ballaariyo sahanka iyada oo laga cashar qaadanayo qalaadkii ka dhacay Muqdisho.
Ciidanka Pakistan ee ku dhintay Muqdisho ayaa daqiiqad loo aamusay,waxaa xigay sacab iyo taageero loo muujiyay nabad ilaaliyayaasha Caalamka oo la sheegay in au u dagaallamaan una dhintaan Bani’adamnimada.
Isha: The Express Tribune
W/Turjumay: Adam Ibrahim Farah
Shir Muqdisho uga socda Guddiyadda Dastuurka